Dugsiga dhexe ee dadka waaweyn (aikuisten perusopetus somaliksi)	[Tredu - Hae opiskelemaan]
Dugsiga dhexe ee dadka waaweyn (aikuisten perusopetus somaliksi)
Ku socda dadka soo galootiga ah
Waxbarashada dugsiga dhexe ee dadka waawayn waxaay u kala qaybsantahay saddex qaybood: qaybta barashada wax akhriska, qaybta bilowga iyo qaybta dhammaynta. Waxaad waxbarashada ka bilaabaysaa qaybta adiga kugu habboon waxaana laguu qorayaa qorshe waxbarasho oo gaar kuu ah. Waxbarashada waxaa ku jira hagitaan waxbarashada ah iyo barashada xirfada nolosha shaqada.
Qaybta barashada wax akhriska
waxaa la baranayaa luqadda finishka, xisaab, aqoonta bulshada iyo dhaqanka, juyuqraafi iyo saysansiska iyo maaddoyin si xor ah loo dooran karo. Hiigsigu wuxuu yahay in la gaadho heerka aqoonta wax akhriska iyo wax qoraalka oo loo diyaariyo qofka in uu sii wadan karoo waxbarashada dugsiga dhexe qaybtiisa hore.
Uma baahnid aqoon luqadda finishka ah oo hore.
Waxaay qaadanaysaa sanad dugsiyeedka oo dhan.
maadooyinka la baranayo waxaa weeyaan luqadda finishka, ingiriis, xisaab, aqoonta bulshada iyo dhaqanka, juyuqraafi iyo sayansis, aqoonta caafimaadka iyo maaddoyin si xor ah loo dooran karo.
Inta aanu qofku bilaabin waa in heerka luqaddiisa finishku ahaataa A1.3.
Waxaay qaadanaysaa qiyaastii 1,5 sano.
maaddooyinka la baranayo waxaa weeyaan luqadda finish, ingiriis, xisaab, aqoonta aragtida nolosha, taariikh, aqoonta bulshada, fiisigis, kemisteri, bayoolaji, juyuqraafi iyo aqoonta caafimaadka.
Inta aanu qofku bilaabin waa in heerka luqaddiisa finishku ahaataa A2.1
Cidda aay ku socoto
Waxbarashada dugsiga dhexe ee dadka waawayn waxaay ku socotaa soo galootiga da’doodu ka wayntahay 17 sano. Waxbarashadu ma laha da’ sare oo aanan lagu dhigan karin.
marka aad dhammayso qaybta dhammaynta waxaad heli kartaa shahaado dugsi dhexe oo finnish ah waxaana kuu bannaan in aad sii dalbato waxbarasho dambe
waxaad buuxsan kartaa waxyaabaha kaaga dhiman shahaadada dugsiga dhexe ama waxaad kor u qaadi kartaa buundooyinkaaga
waxaad sidoo kale diyaarin kartaa koorsooyin gaar gaar ah
waxaad baran kartaa akhriska iyo qoraalka iyo af finnishka
Macluumaad dheeri ah oo dalbashada ku saabsan waxaad ka heli kartaa bogga qaybtiisa midig meesha laga dooran karo dalbo waxbarasho
Dugsiga dhexe ee dadka waaweyn
luqadda iyo dhaqanka finnishka
Ulkoinen linkkiHalkan ka xareyso dalbkaaga dugsiga dhexe ee dadka waawayn (linkigu wuxuu furanyahay kaliya wakhtiga dalbashada)
Waxaad waxbarashada ka soo dhex dalban kartaa internetka adiga oo u madaxbannaan.
Dugsiga dhexe ee dadka waawayn waxaad ka dalban kartaa qaybta bilowga ee wax akhriska ama qaybta dhammaynta.
Kooxaha cusub waxaa la bilaabaa Oogast iyo Jannaayo, wakhtiyada la soo dalban karana waxaa laguugu sheegayaa boggan. Qaybta wax akhriska iyo qaybta bilowga ah koorsooyin gaar ah oo la socda haddii aad rabto waxaad ka waraysan kartaa hagaha waxbarashada.
Macluumaadka warbixinadda iyo maalmaha dalabka.
Warbixinta dheeraadka ah waxaad ka helaysaa koorsada.
Kaalay maalinta hagitaanka iyo dalbashada, haddii aad rabto caawimaad ku saabsan xaraysashada dalabka. Annaga ayaa kaa caawinayna doorashada koorsada kugu habboon.
Maalinta imtixaanada doorashada waxaa lagu soo sheegayaa boggan.
Waxbarashada waxaa la hirgalinayaa maalmaha shaqada oo dhan, isniin illaa jimce.
Xalaadda koronaha darteed waxaa macquul ah in waxbarashada aay ku jirto in guriga lagu barto iyo in fiidkii la barto.
Waxbarashadu waa lacag la’aan. Qalabka waxbarashada iyo cuntaduna waa lacag la’aan.
Wayddi macluumaad dheeri ah
Nala soo xidhiidh haddii aad u baahato caawimaad ku saabsan buuxinta dalabka.